Godinaa Hararagee Lixaa Magalaa Ciroo Ayyaana ODP – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsGodinaa Hararagee Lixaa Magalaa Ciroo Ayyaana ODP
Godinaa Hararagee Lixaa Magalaa Ciroo Ayyaana ODP
Godinaa Hararagee Lixaa Magalaa Ciroo Ayyaana ODP Waggaa 1ffaa Irratti Qeerroon Magaalaa ciroo Ergaa Dabrfaatee
#etv ህፃን ሴኔት በሚሊንየም አዳራሽ
Senet Gizachew poem at Millinium Hall
I don’t understand why few people are complaining her on her performance.
Saamicha Waraanaa Oromiyaa Lixaatti
“Waraanni mootummaa Abiy ummata Oromoo saamaa jira.
Maddeen keenya akka nuuf ibsanitti Oromiyaa lixaa keessatti abbootiin qabeenyaa humnaan saamamaa jiru.
Dambii Doolloo, Ayira, Caanqaa, Gidaamii, Boojii fi Beegii fa’aa keessatti abbootiin qabeenyaa humna waraanaan erga qabamanii hidhamanii booda filannoon gubboo kaffaluu yookaaan Xoolayitti baatii sadiif hidhamuuti kennamaaf. Kanneen Birrii kuma kudhanii ol baasuuf filatan maalalaqicha kennanii hidha airara hafa ajiru. Kanneen maallaqicha hin qabne immoo ukkaamsamanii gara Xoollayiitti ergamaa jiru.
Daldaltoonnis horii baankii baasanii yoo mi’a bitachuuf adeemu ta’e hordofanii qabuun maallaqa irraa saamaa akak jiran beekameera. Yeroo ammaa kanatti daldaltoonni Oromoo hedduun Birrii kuma kudhanii haga kuma dhibbaa saamamanii akak jiran maddeen keenya saaxilaniiru.”
Dargaggootni kunneen sadan torban darbe magaalaa Naqamtee keessatti ukkaamsamanii hanga ammaa achi turuun guyyaa har’aa gara Finfinneetti dabarsamanii jiru.
OBS-Turtii Obbo Baqqalaa Garbaa Itti aanaa paartii KFO
Colonel Abiy poudly told his audience that he is an accomplished beggar second to no one on the planet, promoting his country’s badge of honour. She forgot to mention that unique abyssinian identity and confusingly attribute to him credentials that should have gone to all those brave Oromos in WBO like Jaal Marro.